Kitten Tattoos - Zvinoreva, Pfungwa uye Zvakawanda Zvakawanda | Kunyora
Susana godoy | | Mhuka Tattoos
Kana iwe uri wechokwadi kati anoda, zvino katsi kittens nyora ivo vachave vekwaunosarudza. Nekuti isu takasara nemwedzi yavo yekutanga yehupenyu, pavanotanga kutsvaga padanho rega rega zvese zviri pamberi pavo. Zvakanaka, isu tinogona zvakare kutakura izvo kumusana kwedu nekutenda kune yakanaka dhizaini.
Iwe unogona kuwana katsi nyora mumhando dzakasiyana siyana, saka zvirokwazvo iyo yawaida ichave yakamirira iwe. Naizvozvo, nhasi tinokupa imwe mazano, zvinoreva uye nezvimwe zvakawanda, saka haugone kupotsa chero chinhu chinotevera.
1 Chii chinorehwa nekati nyora
2 Cat tattoos yevakadzi nevarume
3 Nhema kittens nyora
Chii chinorehwa nekati nyora
Kunyangwe chiri chokwadi kuti katsi dzaive dzakabatana nemashiripiti, hazviwanzo nguva dzose kuve nerevo isina kunaka, kure nazvo. Dzakanaka nguva idzo dzinowedzera mweya nyowani kumatiketi ekiti. Kusiya zvese zvakaipa padivi, zvinofanirwa kutaurwa izvozvo chimiro chayo chakanaka chinotarisa pakupona. Sei? Zvakanaka, sekuziva kwedu, zvinonzi vane hupenyu hunomwe. Naizvozvo, zvinomiririra simba kana kurwira kuti ukwanise kufambira mberi. Ndokusaka vanhu vazhinji vachitora tattoo yekati pavanobuda mune yakashata chiitiko muhupenyu hwavo. Kusiya mucherechedzo mukuzvarwa patsva.
Ehe saizvozvo kune rimwe divi inonzi ndiyo inoreva huchenjeri hukuru. Zvese izvi nekuda kwemweya wavo wekuda kuziva, uye pakupedzisira zvinoita sekunge vanonzwa kana kuwana zvinhu izvo zvisingawanikwe nemhuka dzese. Iyo inomiririra zvakare chakavanzika uye kunyangwe kubereka. Kubva pane izvo zvatinoona, isu tinofanirwa kugara tichiisa zvirevo izvi mune izvo zvatinoda kumiririra, kuti tiwane mugumo wakanaka
Cat tattoos yevakadzi nevarume
Izvo zvinonzi kuti katsi nyora dzinowanzoonekwa pane vakadzi. Asi zvishoma nezvishoma varume vacho vanozviratidzawo navo, nekuti ichagara iri nyaya yekuravira.
Kumeso nyora: Imwe yemafungiro makuru ndeyechokwadi kumeso tattoo. Kune izvi, kana iwe uine chipfuwo chichava chako chakanakisa sarudzo, kana zvisiri, sarudza iyo inokupa iwe uye yakawanda
Minimalist katsi tattoo: Ndiyo imwe yemazano akabudirira kwazvo. Dhizaini, yakapusa dhizaini iyo mitsara yemitsetse inowanzo dhirwa muinki nhema, isina mavara
Makitsi maviri: Zvakajairika kuti kana ivo vari vadiki, ivo vakakomberedzwa nemhuri yavo yechikadzi. Naizvozvo, isu tinogona zvakare kuvapfekedza yakashongedzwa paganda, ine diki dhizaini asi panowoneka inopfuura imwe.
Kitten mukusingaperi: Pasina kupokana, ndeimwe yemagadzirirwo akajairika. Sezvatinogona kuona, zvakare inowanzo kuve neyakaganhurirwa saizi uye nechiratidzo chisingambobuda muchitaera uye icho chinopa rwese rudo.
Tsoka: Paruoko kana pamagumbo zvinowanzoonekwawo kuti nzira dzefimin dzinoshongedza sei ganda. Chiratidzo cherudo uye zvakare chemweya wakasununguka.
Kana isu tikataura nezve katsi nyora dzevarume, ivo vanogona kuzvisarudzira ivo kana kune makuru dhizaini kana ane mamwe chaiwo maumbirwo. Unozviratidza sei?
Nhema kittens nyora
Nekuti hazvina basa kana iwo ari madiki kana akakura, nekuti iyo katsi nhema vachagara vari pakati pevatinonyanya kufarira. Ivo vane icho chirevo chemashiripiti asi zvakare chakabatanidzwa kune yakanakisa kupedzisa yatinogona kusarudza. Muchiitiko ichi, zvakajairika kusarudza siluetti yemhara yedu. Saka isuwo tinofanirwa kutaura nezve idiki madhizaini asi zvine zvirevo zvakanyanya sezvinobvira.
Ichokwadi kuti, sekune mamwe magadzirirwo, kana iwe uine katsi zvinogara zviri nani kufunga nezve chimwe chinhu chakanyanya chokwadi kuti chipfuwo chienderane. Saka zvinodikanwa kuti uzviise muchigadzirwa nenzira yakasarudzika, uchigara uchiwedzera ruzivo rwatinofarira kana rwune chekuita narwo feline yedu yatinofarira. Iwe unofarira katsi nyora here?
Mifananidzo: Pinterest, @ leti.ruggeri, www.dubuddha.org, smalltattoos.com
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Mhuka Tattoos » Kitten nyora
Tattoos Saint Michael ngirozi huru, ngirozi yakaipa kwazvo